I-Wholesale Portable Inflatable Stand Up Paddle Board yabantu abadala I-SUP ephethe ubhaka wokugcina Ukukhiqiza kanye Nemboni |XGEAR
Ibhodi Eliphathekayo le-Inflatable Stand Up Paddle yabantu abadala I-SUP enobhaka wokugcina
I-XGEAR 10'6″ I-Inflatable Stand Up Paddle Board enama-Fins angu-3, ​​ukwakhiwa okusha kwe-ultralight ene-dual layer 6” i-PVC enogqinsi ozinze kakhulu kunezinye ibhodi lokugwedla elivamile elingu-4” & 5”.Idizayini eyikhethelo nokubamba okungasheleli kwamabhodi ethu okugwedla amile kuqinisekisa ukuqina okuhle.Ububanzi obengeziwe ngo-32″ okokulinganisa ukuma okungcono.
I-ISUP ephathekayo ye-XGEAR enobhakha wesitoreji muhle kuwo wonke amazinga wamakhono futhi iphelele ezindaweni eziningi zasemanzini.
Isikhathi esiholayo:IZINSUKU ezingu-40
● I-XGEAR inflatable sup ingu-10' 6''ubude, futhi sithuthukise ukuma nobhalansi ngo-32'' wobubanzi bedekhi.Isisindo singu-19.8Ibs futhi isisindo esisekelwe sifika ku-300Ibs.
● I-XGEAR lightweight stand up paddle board yenziwe nge-high pressure double wall drop drop stitch (Ibha engu-Max 1 noma i-14.5Psi) okuyimpahla yezinga eliphezulu lezempi.Ukuqina okuxutshiwe sukuma ibhodi lokugwedla elinegwebu le-Non-Slip EVA, lilungele wonke amazinga wamakhono nezinga eliphakeme kakhulu lokugwema ukuwela emanzini.
● Iphampu elinegeji.Ibhodi le-sup paddle elinamaphiko angu-3 linikeza ukuzinza okungcono kakhulu nokuhamba kahle, asikho isidingo sethuluzi lokufaka amaphiko.
● Ibhodi lethu le-supboard eliphefumulayo elinezindandatho ze-D zentambo evikelekile, intambo yokunwebeka noma isihlalo se-Kayak.Futhi kufaka phakathi iphedi ye-traction ye-diamond groove enethezekile.
Indaba Eyinhloko I-Ultra entsha-ukwakhiwa okukhanyayo nge-PVC ye-dual layer6'' ukujiya
I-psi yokusebenza ephakanyisiwe 15 psi
Umthamo wesisindo esikhulu 300lbs
Ubukhulu bento L126 x W32 x H6amayintshi
Usayizi webhokisi langaphakathi (usayizi wokugoqa) L33.9 x W15.75 x H9.85 amayintshi
Isisindo sento 13.5KG
Usayizi webhokisi L34x W16 x H12 amayintshi (1pcs/box)
IkhathoniGros Isisindo 14KG
Qaphela: Njengoba imikhiqizo ivuselelwa njalo, sicela usithinte ukuze uthole imininingwane yakamuva.
Tutholakala umbala for ingqikithi ezine isitayela:
I-XGEAR ISUP enezinsiza eziphelele zebhodi lokugwedla, lezi zimfuneko zokugwedla njengoba zingezansi:
1. Ibhodi Lokugwedla Eline-Inflatable Stand Up;
2. Isigwedlo se-aluminium esilungisekayo esithuthukisiwe;
3. Iphampu yomoya eyenziwe ngesandla;
4. Isikhwama sesitoreji- ubhaka we-premium;
5. Fin/ skeg yokulandela umkhondo;
6. Ikhithi yokulungisa;
7. Ukuphepha/ I-Kayak paddle leash.
Indlela yokuhlanganisa ukwakhiwa:
1. Khipha ibhodi eligoqiwe ulibeke endaweni eyisicaba bese ulivula.
2. Bese uhlomisa i-fin enkulu.
3. Qiniseka ukuthi i-valve core isendaweni efanele--“phezulu futhi ivale”.
4. Vele uxhume i-valve nepompo, bese ufaka umoya kuze kufike ukucindezela okukhulu.
Indlela yokunciphisa nokupakisha:
1. Kuyise endaweni eyisicaba futhi ukhumbule ukwenza isiqiniseko sokuthi ibhodi lokugwedla lihlanzekile futhi lomile.
2. Cindezela bese uphendulela i-valve core ukujika okuyi-1/4 ngokwewashi ukuze udedele umoya
3. Susa i-fin enkulu
4. Goqa i-sup board usuke ekhaleni uqhubeke nokuphusha umoya ngenkathi ugoqa
5. Gcina ibhodi eligoqiwe kubhaka.
Leli bhodi lokugwedla liyaphatheka ukuligcina nokuyiphatha, lingagoqwa ukuze kube lula ukuhamba, lincibilike bese lifakwa kubhaka.Uma ufika endaweni oya kuyo, ungakwazi ukufutha ngokushesha ibhodi lakho ngepompo bese ungena emanzini ngaso leso sikhathi.
Ifaneleka ezindaweni eziningi zamanzi.Njengesi-si-eashore surfing, i-snorkeling, rawu echibini, ukulala, i-yoga, ukudoba, ukuvakasha nokunye.Idizayini ekhethekile ye-XGEAR enokubambelela okungasheleli iqinisekisa ukuphepha nokuqina, ngakho ilungele wonke amazinga nezimo zamakhono.
Okwedlule: I-XGEAR Pop Up Easy Faka i-6 sided Hub Screen House /Canopy
Olandelayo: Ukuthengiswa Okushisayo Kwentambo Yempi Yesitayela Esisha Yamandla Nokuqeqeshwa Okubalulekile
Camouflage Low Back Folding Boat Seat for Fishing
Isihlalo Esigoqekayo Esigoqayo Esinohlaka Lwe-Aluminium...
I-Low Back Fishing Boat Seat enomsebenzi ogoqekayo